Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: February 2008
Ethnic Nationalities Council(Union of Burma)
Statement No. 2/ 2008Date: 29 February 2008
Statement on the SPDC Announcement on Referendum
1. The Ethnic Nationalities Council (ENC) believes that political crisis in Burma is not just ideological confrontation between military dictatorship and democracy butaconstitutional problem rooted in the denial of the rights of ethnic nationalities who joined the Union of Burma as equal partners in 1947 at Panglong Conference.
2.Since the root cause of political crisis is “constitution”, the problem should also be solved through constitutional means. As such, Burma needsanew constitution.
3.The Ethnic National Council and other democratic forces have draftedanew constitution of “Federal Republic of the Union of Burma” based on the spirit of “Panglong” and fundamental principles of democracy, equality and justice. A draft constitution also provides guarantees for collective rights of ethnic nationalities, human rights and gender equality, minority rights for all religious and ethnic groups, and the separation of politics and religion.
4.The SPDC announced that they will conductareferendum in order to adoptanew constitution, which has drawn up in accordance with its7Steps Road Map. If the SPDC wants to peacefully implement its Road Map, it needs to consult widely with the ethnic nationalities, democratic forces, and ceasefire and non-ceasefires armed groups. However, the SPDC’s7Steps Road Map and its constitution process are not inclusive nor does it reflect the spirit of national reconciliation. The whole purpose of the SPDC constitution is to legalize the military dictatorship through constitutional means.
5.For the sake of the country and the people, and also for starting national reconciliation and establishing peace, the Ethnic Nationalities Council (ENC) proposes the following points:
(i)thatabroad-based “Constitutional Review Commission” be formed as proposed by Mr. Gambari, UN Secretary-General Special Envoy for Burma, in October 2007, to review two draft constitutions prepared, one by the Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee (FCDCC) on behalf of ethnic nationalities and democratic forces, and another one by the State Peace and Development Council (SPDC) at its National Convention.
(ii)that the Constitution Review Commission invites the main stakeholders of the Union of Burma, namely the SPDC, the 1990 election winning party led by Daw Aung San Suu Kyi, and Ethnic Nationalities foratripartite consultation meeting in order to make necessary compromise and give-and-take through negotiation.
(iii) that the role of armed forces in the future Union of Burma,ademocratic transition, and the right of ethnic nationalities throughafederal arrangement be included in the tripartite consultation meeting;
(iv)thatatransitional authority be formed by the SPDC, the 1990 election winning party led by Daw Aung San Suu Kyi, and ethnic nationalities based on the resultatripartite negotiation.
6.For the sake of peace and stability not only in Burma but also in the region, we request the international community, especially our neighboring countries, including China, India and ASEAN, to mediateatripartite negotiation among the SPDC, the 1990 election winning party led by Daw Aung San Suu Kyi and ethnic nationalities.
7.If the SPDC rejects our proposal, we will have no choice but to call on the people of Burma to reject the SPDC’s constitution at its referendum in May 2008.
Dr. Lian H. Sakhong
Tel: +66-(0)81 02 96 100
Tel: +66-(0)81-30 64 351
ရဲရင့်ပြီးတိုက်ရဲခိုက်ရဲတဲ့အသွင်လက္ခဏာဆောင်သောအနီးရောင်ကို ဖြုတ်ခိုင်းပြီး အညံ့ခံပြီးစစ်ရှုံးသော အသွင်
လက္ခဏာကိုဆောင်သော အဖြူရောင်ကို တပ်ပေးနေခြင်း၊ သို.မဟုတ် အလံနီးဖြုတ်ခိုင်းပြီး အလံဖြူထောင်ခိုင်း ခြင်း၊သို.မဟုတ် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ.တွေကို လည်ပင်းညှစ် သတ်နေခြင်း၊ နှင့်ထောင်ခြောက်တွင်တွင်းသေ ခိုင်းခြင်း။
Kachin ceasefire groups to get white coloured IDs
News - Kachin News Group
The three main Kachin ceasefire groups in Kachin State, northern Burma will be issued white colour identity cards (ID) instead of the common national ID card (red in colour) by the Burmese military junta.
The order was issued by Burma's ruling junta through the Northern Command commander Maj-Gen Ohn Myint to the immigration offices in Kachin State. All the members of the Kachin Independence Organization (KIO) and its armed wing Kachin Independence Army (KIA), the New Democratic Army-Kachin (NDA-K) and Lasang Awng Wa Peace Group would have white colour ID cards issued to them,asource said.
The commander has ordered completion of the ID for the Kachin ceasefire groups withinamonth. Some immigration officers have already arrived in Laiza which isaKIO controlled area for processing the ID, saidasource close to the immigration office.
The reason behind making white colour ID cards is to differentiate between citizens and Kachin ceasefire group members. The ID cards will not be valid to help make passports to travel abroad. Card holders can only travel within the country and can stay in one place for only two weeks, according to local immigration officers.
Some members of Kachin ceasefire groups have already made the common national ID card (red colour) but whether they can use it anymore is still uncertain, the immigration officers added.
In November last year, Burmese military junta had made first time white colour identity cards for residents in Sumprabum town in Putao district which is in the KIO controlled area after negotiating with the KIO.
Meanwhile, the authorities in Myitkyina, the capital of Kachin State have made national ID card for residents who are over the age of 18 and the family unit (Ing-htaung-su) for residents who stay without documents in town.
Boycott Beijing Olympic, Boycott these Stuffs
Olympic Corporate Sponsors
These companies, as Olympic Sponsors, have strong influence with the Chinese government. And we urge all those who are part of the Olympic games to use their influence to ensure that these games are not tainted. We will be sending letters to these sponsors with our requests, and we ask you to do the same. It only takesafew moments. Sing Up Here
Inner Mongolia Yili Industrial International
Tsingtao Brewery Co.,
Bank of ChinaChina
NetworkCommunications Group Corporation
ဓါတ်ပုံများသည် ကိုနစ်နေမာန် ဘလောက်မှ ကူးယူထားပါသည်
ရဟန်းသံဃာတော်များက မြန်မာလူထုကို အသက်စွန်.ပြီး မီးဘေးမှကူညီပြန်ပြီ
ပြည်သူလူထုနှင့် ရဟန်းသံဃာတော်များကိုသာ သေအောင်၊ငြိမ်းအောင် သတ်တတ်သော မြန်မာ့မီးသတ်၊ အရံ မီးသတ် နှင့်စစ်တပ်များက ရတနာပုံမီးချူပ်ငြိမ်းအောင်မသတ်နိုင်၊
မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ.မနက်ပိုင်း (၂၀၀၈၊၀၂၊၂၅၊ ၈း၀၀)လောက်တွင် မန္တလေးမြို.ရှိ ရတနာပုံဈေးကို မီးစလောင်ကျွမ်းဖြစ်သည့်အခါ မြန်မာ့မီးသတ်၊အရံမီးသတ်သမားများက ကားအစီးမျာစွာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး
မီးငြိမ်းသတ်ကြပေမဲ့ အောက်စီဂျင်ဘူးရှူပေါက်စတဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းများမလုံလောက်သဖြင့် တအူအူထွက်နေသောမီးခိုးများကို ဘယ်လိုမှ အနီးကပ်မခံနိုင်သည့်အဆုံး မီးလောင်ကျွမ်းသည့်နေရာကို လုံးဝရေပက်လို.မရောက်ပါ၊ထို.ကဲ့အခြေအနေကို တွေ.မြင်ရသောအခါ ရဟန်းသံဃာတော်များက ပြည်သူအတွက်စွန်.စားလေ့မရှိသော မြန်မာ့မီးသတ်သမားများ၏တာဝန်ကို အသက်စွန်.ပြီးအစားထိုးဝင်ရောက်
ကူညီခဲ့ပြန်သည်။သံဃာတော်များက မီးသတ်ကားအပေါ်တက်ပြီး ရေပိုက်ကိုင်စွဲကာ မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို.အပြင်၊ ရတနာပုံဈေးတွင် မြန်မာလူထုပိုင်ပစ္စည်းများကိုလဲ ဝိုင်းဝန်သယ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြန်သည်။
တပြည်လုံးရှိ ပြည်သူလူထုနှင့်ရဟန်းသံဃာတော်များကိုသာ သေအောင်၊ငြိမ်းအောင် သတ်တတ်သောမြန်မာ့
မီးသတ်၊အရံမီးသတ်နှင့်စစ်တပ်များကို ရတနာပုံမီးကျတော့ မီးငြိမ်းအောင်မသတ်နိုင်တာဟာ မြန်မာလူထုတွေ
Mon National Day kicks off worldwide
Kaowao: February 21, 2008
Mon National Day Committees in their new homes and host countries are preparing for the big annual Mon National Day celebration and have been working hard to unite their people in an event that will draw in thousands for fun and entertainment.
In most locations, such as in Malaysia , Thailand and back home in Burma , Mon National Day will be celebrated on Friday, February 22, but in the US , Australia and Canada the grand event will take place on the weekend.According to the Mon Affairs Union (MAU), the Mon community at the Thailand Burma border area is joining the event with the New Mon State Party at Palai Japan village.
Overseas Mon Coordinating Committee (OMCC) is also draftingajoint statement for the 61st Anniversary of Mon National Day.
The Thai-Mon community have already hosted the event on February 2nd and 3rd at Ban Rai Thai Mon village near Samutsakhorn fishing community but the event was not attended by migrant workers due to harassment by the Thai local police.
The Three Pagodas Pass Mon community has to celebrate with low-profile modest festivities this year asabomb went off to disrupt the event and celebrants are wary of another possible attack this year.
Mon National Day is largely celebrated back home in Burma in areas dominated by Mon inhabitants in Mon State , Karen State , Rangoon and Pegu.
The celebration has grown in Mon immigrant communities across Asia, Europe, Australia and North America where Mons live and enjoy some freedom.Mon migrant workers in South Korea celebrated Mon National Day on Februry 7th ataKorean monastery in Seoul . According to Nai Blai organizer of the MND, there are over one hundred Mons working in Korea and almost all of them attended this event.
The event was organized by Mon singer Gong Chan, Nai Tin Min and Nai Blai.The MND was also celebrated in London , UK on February 16, 2008 with cultural performance and traditional food.
Mon leaders in 1948 implemented the first Mon National Day to bring together people inameaningful way based on cultural heritage and political aspirations asapeople.
The 1st Mon National Day Ceremony was celebrated at the cinema hall of Wae Dut (Ywa Lut) in Beelu Kyun Island , Mon State . According to the booklet written by Rev. Abbot Palita,7leaders who organized the event were Rev. Abbot Kusala, Mon Pho Cho (President of UMA), Nai Pho Aung, Nai Pho Sein, Nai Htaw Aa, Nai Chan Mon (Secretary of UMA) and Nai Pyaing.
In Canada , jointly hosted by the Mon Canadian Society, Mon Women's Organization and Mon Buddhist Temple ( Canada ), the Mon National Day in Calgary will be held from6p.m. to midnight at Southview Community Association.
The Mon Canadians will hold this event asa10th year celebration featuring cultural performance led by Mi Ohnmar andalive music band led by Nai Reh Nai.“We name our band ‘Band Mon Poey’.
It isagreat opportunity for us to welcome Canadians and friends in honouring our heritage. We also want to highlight the same spirit 10 years ago when we started this celebration in Canada ", said an organizer of the MND in Calgary . Eric Snider,alongtime Canadian supporter of Burma recalls the first celebration in Canada, “It was my pleasure to beapart of the first celebration of Mon National Day in the city of Vancouver more than 10 years ago and I am glad to know that you are continuing the fine tradition that I was part of then. Let us live and work for the day when it will be possible for the Mon community to celebrate this day as gladly and openly in the heartland of the Mon people in Burma itself as it is done in more thanadozen countries around the world today.”
ချင်းအမျိုးသားနေ.အခမ်းအနား ရန်ကုန် နှင့် ချင်းမိုင်တွင်ကျင်းပ
စစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက လက်မခံ
ဦးသားညွန့်ဦး - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) ဦးသားညွန့်ဦး - နားဆင်ရန် (MP3)
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လူထုဆန္ဒခံယူမယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်အပေါ် မြန်မာအစိုးရနဲ့အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးယူထားတဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကတော့ လက်မခံ ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် စစ်အစိုးရဖက်က ဖိအားပေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ပျက်ပြယ်မယ့်အလားအလာ သူတို့ဖက်က စဉ်းစားထားတယ်လို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကိုဦးသားညွှန့်ဦးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေး ညီလာခံကို မတတ်ရောက်ဘဲ နုတ်ထွက် ခဲ့တာကြောင့် ဒီညီလာခံရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာချက်တွေကို လက်မခံတာဖြစ်တယ်လို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီပြောခွင့်ရသူ နိုင်အောင်မငဲက အခုလိုပြောပါတယ်။
“SPDC က ကြေညာထားတဲ့ကိစ္စဟာ အမျိုးသားညီလာခံရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့က အမျိုးသားညီလာခံကနေ နုတ်ထွက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီအမျိုးသားညီလာခံရဲ့ ရလဒ်အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ ပါဝင်မပတ်သက်ဘူး။ ဆက်ဆံမှုမရှိဘူး။ ပြီးတော့ ထောက်လည်း မထောက်ခံပါဘူးခင်ဗျာ။”
မြန်မာစစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး ရယူထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဥပဒေဘောင်ဝင်ရမယ်၊ လက်နက်စွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုး ပြောနေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လက်နက် ဖြုတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီက သဘောထား ဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျ။
“သူတို့က အတင်းအဓ္ဓမ အင်အားသုံးပြီးတော့ လက်နက်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်။ ပါတီကိုဖြတ်ခိုင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တပ်နဲ့ ပါတီကို တသီးတခြားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်အရ ကျွန်တော်တို့ ကာကွယ်ရမယ့် အခြေခံမူပဲဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာစစ်အစိုးရက သူတို့လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းညွှန်မြေပုံဟာဆိုရင် အခုဆိုရင်စတုတ္ထအဆင့်ကို ရောက်သွားပါပြီ။ ဒါကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် တခြား ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လုပ်စေချင်ပါသလဲ။ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင်ဘယ်လို အကြံပြုချင်လဲခင်ဗျ။
“ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ SPDC ချထားတဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့က တလွဲစီဖြစ်နေတယ်လေ။ အဲဒီလို လွဲနေတဲ့လမ်းကြောင်းလဲ ကျွန်တော်တို့ မလိုက်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပေါ်လစီက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတခုပဲ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ပဲ ဖြေရှင်းချင်တယ်။ ဖြေရှင်းပေးဖြစ်အောင်လဲ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးကတည်းက တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အမျိုးသားညီလာခံမှာလည်း တက်ရောက် အကြံပြု ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားညီလာခံမှာ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာ အမျိုးသားညီလာခံရဲ့ ရလဒ်ဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ရော၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခု ပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်ရော အလှမ်းဝေးနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ အမျိုးသားညီလာခံကနေပြီးတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖြေရှင်းချက် ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့် အမျိုးသားညီလာခံက ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းချက်အတိုင်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမယ်။ ပြည်သူတွေကို ကျွန်တော်တို့ ပြောမယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသာလျှင် မြန်မာပြည်အတွက် ကောင်းသော ထွက်ပေါက်တခု ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ ရှင်းပြမယ်။ ဒီအဖြေကလွဲပြီး တခြားအဖြေနဲ့ ဘယ်လိုပဲ လုပ်လုပ်၊တဇွတ်ထိုးပဲလုပ်လုပ် ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း မယုံကြည်ဘူး။ ”
အခုက သုံးပွင့်ဆိုင်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးအောင်ကြည်တို့ တွေ့ဆုံနေတာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ဘယ်လောက်ထိ မျှော်လင့်ထားပါလဲ။
“၂ /၂၀၀၈ ထွက်ပြီးကတည်းက ဒီတွေ့ဆုံမှုတွေဟာ အလကားဖြစ်သွားပြီလို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ဘာမှ အရာမထင်ဘူးလို့လည်း ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။ ဒီတွေ့ဆုံမှုကတကယ့် စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံမှု အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။”
ဒါဆိုလို့ရှိရင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းပြမြေပုံကို ဒီအတိုင်းဆို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးရယူထားတဲ့ သဘောတူညီချက်ကရော နောက်ပိုင်း ပြတ်မလာနိုင်ဘူးလား။
“သဘာဝအရတော့ ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အမျိုးသားညီလာခံက နုတ်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း တစတစ ဖိအားပေးမှုရှိခဲ့တယ်။ စီးပွားရေး အခွင့်အရေးတွေ တစတစ ဖြတ်တောက်ခံနေရတာကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် နောက်ဆုံးတော့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုင်တွယ်ပုံ ကိုင်တွယ်နည်းမှာမူတည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ စပြီးဖျက်မှာ မဟုတ်ဘူး။”
မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ပြောခွင့်ရသူ နိုင်အောင်မငဲပြောခဲ့တာပါ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကတည်းက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးယူခဲ့တာပါ။အမျိုးသားညီလာခံ ကနဦးပိုင်းကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်စားလှယ်အဆင့်ကနေ လေ့လာသူအဆင့်အထိမွန်ပြည်သစ်ပါတီဖက်က လျှော့ချခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေ ရှိလာခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုဖြစ်ပါတယ်။
Key dates in Kosovo's decades-long drive for independence
February 16, 2008 at 5:02 PM EST
The Key dates in Kosovo's decades-long – and often bloody – drive to gain independence from Serbia:
1968: First pro-independence demonstrations by ethnic Albanians in Kosovo, when it was part of Yugoslavia; many arrested.
1991: As Yugoslavia implodes, separatists proclaim Kosovoarepublic, which is recognized by neighbouring Albania.
1996: Pro-independence Kosovo Liberation Army emerges, claims responsibility for bombings of police targets.
March-April, 1998: Dozens killed in Serb police action against suspected Albanian separatists. Serbs overwhelmingly reject international mediation on Kosovo in referendum. New international sanctions imposed on Yugoslavia.
July-September, 1998: KLA seizes control of 40 per cent of Kosovo before being routed in Serb offensive. Serb forces attack villages; 22 ethnic Albanians found massacred in central Kosovo.
October, 1998: NATO allies authorize airstrikes against Serb military targets.
Jan. 15, 1999: 45 ethnic Albanians slain outside Racak,aKosovo villiage. International officials demand war crimes investigation.
March, 1999: Belgrade authorities reject the internationally brokered peace deal, while ethnic Albanians sign it.
March 24, 1999: NATO launches 78 days of airstrikes against Yugoslavia.
March-June, 1999: Serb forces push out 800,000 ethnic Albanians who flee Kosovo into Albania and Macedonia.
June 10, 1999: Yugoslav leader Slobodan Milosevic agrees to withdraw troops from Kosovo after agreeing toaproposal for NATO to move in and the province to be run by UN Airstrikes halted. Some 50,000 NATO-led peacekeepers begin deploying in Kosovo, refugees stream back while Serbs flee in the wake of revenge attacks.
Oct. 6, 2000: Mr. Milosevic resigns after mass demonstrations protesting his refusal to accept electoral defeat.
June 28, 2001: Mr. Milosevic extradited to The Hague to face trial for war crimes, dies before trial ends.
February, 2002: Kosovo elects parliament and government with Ibrahim Rugova as president.
October, 2003: First direct talks between Serbian and Kosovo Albanian leaders since 1999 end without agreement.
March, 2004: Ethnic Albanian mobs attack Serbs in worst outbreak of violence since the war.
January, 2006: Mr. Rugova dies of lung cancer in Pristina, Kosovo's capital.
February, 2006: UN-mediated talks on Kosovo's future status begin.
October, 2006: In Serbian referendum, Kosovo is declared an integral part of Serbia.
Jan. 26, 2007: UN envoy Martti Ahtisaari unveils recommended guidelines to Kosovo's eventual statehood.
April, 2007: Russia rejects Ahtisaari proposal in the UN Security Council.
June, 2007: U.S. President George W. Bush says Kosovo needs to be independent “sooner rather than later.”
July, 2007: Kosovo's prime minister says UN-sponsored process has failed and calls for declaration of independence by year's end.
February, 2008 : Kosovo prepares to declare independence.
သတင်း Record, မှတ်တမြး
For more pictures , click here
Troops arrive as Kosovo declares independence
World leaders bracing forachaotic and possibly catastrophic gestation period
E-mail Doug Saunders
February 18, 2008 at 2:13 AM EST
After the fireworks and joyous gunshots heralding national independence dissipated into the icy Pristina air late Sunday night, scores of heavy-lift military aircraft could be seen landing at Kosovo's main airport, carrying thousands of extra troops into what is likely to beadifficult and vastly expensive international project.
Kosovo,alandlocked speck of the Balkans less than twice the size of Prince Edward Island, faces more than 50 per cent unemployment and potentially deadly racial divisions among its two million citizens, requiring military commitments that could jeopardize the Afghanistan-war coalition.
Sunday, as its Albanian-speaking parliament declared independence from Serbia, Kosovo gave itselfaflag and made several attempts at composinganational anthem. The head of the Kosovo Olympic Committee, Besim Hasani, confidently told The Globe and Mail that “it is 100 per cent sure that we will participate in the Olympic games in Beijing.” (Kosovo has not been recognized as an Olympic nation.)
But even many of the revellers in Pristina realized that their condition is unlikely to improve soon.
“This is good,” said Andi Tahiri, 28, waving an Albanian andaU.S. flag, “but you know, tomorrow we will see the same things as we do today. No electricity, no water. The hole in my road is still there. We will facealot of problems.”
World leaders are bracing themselves forachaotic and possibly catastrophic gestation period.
The province of Serbia, which has been an ambiguous United Nations protectorate since NATO bombs putastop to Slobodan Milosevic's efforts to purge the region of its Albanian-speaking majority in 1999, will be recognized by most of the world asanation. The United States, Britain, France and Ireland have already vowed to do so, and at an emergency UN Security Council meeting Sunday, only Russia openly opposed the move.
Those familiar with Ottawa's strategy say that Canada plans to recognize Kosovo's nationhood, but will deliberately be among the last nations to do so, possibly several weeks from now, as it did when Montenegro became independent from Serbia in 2006.
This is presumably because the unilateral action could raise awkward questions about Canada's stand towardasimilar action in Quebec.
Kosovo's leaders tried Sunday to play down any suggestion that their independence isaprecedent for other breakaway regions. “Kosovo is the last station of Yugoslavia's disintegration and it does not pose any precedent for other regions elsewhere in the world,” Prime Minister Hashim Thaci told the parliament while reading the declaration of independence.
But Kosovo's hopes of developing an economy or avoiding ethnic slaughter will require large-scale international assistance, at enormous expense. Three hand grenades were exploded outsideaUN court in Mitrovica Sunday night,aportent of angry ethnic-Serb reprisals, and ethnic-Albanian acts of intolerance, that could poison the independence.
The European Union is sendinga2,000-personnel “peace and justice” force, plus 1,000 British troops who were described in London as having exhausted the fighting strength of Britain, which has troops in Iraq and Afghanistan. These are on top of the 15,000 NATO troops permanently stationed in Kosovo.
In comparison, there are about 45,000 international troops fighting in Afghanistan,acountry 65 times larger than Kosovo.
Open warfare is not consideredalikely possibility in Kosovo. The threat this week, Western military officials said, comes not from national armies fighting over Kosovo – both Serbia's leaders and Russian president Vladimir Putin have vowed not to become militarily involved over Kosovo. Rather, it comes from street-level Serbian and Albanian-speaking ethnic militias, underground radical groups within Serbia's other provinces angered by the independence ofaregion that wasamedieval seat of the Serbian Orthodox Church, and angry individuals.
“Serbia will not turn to violence,” Serbian President Boris Tadic,apro-European moderate, said in Belgrade Sunday. “This is the only approach that will allow us to fulfill our legitimate goal, aimed at preserving the country's integrity. Serbia will defend its interests and international law as long as necessary to annul this illegitimate act.”
But Serbian Prime Minister Vojislav Kostunica,amore nationalist-minded politician, said Sunday that Europe and the United States will be “held responsible for all the consequences that will arise from Kosovo's independence,” and said that Belgrade will continue to act as if Kosovo is part of its territory, sending in government officers to establish their sovereignty there and deliver “jobs and investments in the province.”
More ominously, he vowed to organizeaseries of demonstrations and rallies across the country, includingahuge event scheduled for Thursday. A portent of the potential violence in such events was seen Sunday night when several hundred furious Serbs stormed the U.S. embassy in Belgrade, throwing flares and rocks but causing little damage.
On the other hand, larger demonstrations failed to materialize in Belgrade, possiblyasign that ordinary Serbs are more interested in their country's path toward European Union membership than they are in their emotional claim to Kosovo.
Monday, 11 February 2008 22:33 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ပဒိုမန်းရှာလာဖန် ကို အလေပြုကြ
တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် အသက်စွန်.သွားသော ပဒိုမာန်ရှာလာဖန်ကို
ပြည်ထောင်စုအရေးနှင့်တွေ.ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့အပေါ် ပြည်ထောင်စုသားများ၏ သဘောထားအ မြင်များ
ပြည်ထောင်စုသားတိုင်းသည် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ခွင့်ရရမှာပေါ့ကွာ။ ဘာသာရေးတင်မကဘူး နိုင်ငံရေးပါ ယုံကြည်ခွင့်ရှိရမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ဘယ်သူမဆို ဘယ်လူမျိုးစုမဆို လွတ်လပ်စွာယုံကြည်နိုင်ရမယ်၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်နိုင်ရမယ်။ လူတိုင်း အခွင့်အရေး အရေးအတူရှိရမှာပေါ့။ ဗမာမို့ ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးမတူလို့ အဲသလိုမရှိရဘူးလေ။ အားလုံး အတူတူ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ခွင့် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် အဲ့ဒါရရမယ်။ ပင်လုံမှာ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်တွေ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေရဖို့ ခုဒီခြေအနေနဲ့တော့ မမြင်သေးဘူး။ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင်ပေါ့ကွာ တစုံတရာ လူတွေက လှုပ်ရှားနိုင်မှရမှာ။
ဦးအေးသာအောင် (ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး)
ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး၊ အမျိုးသားသွေးစည်း ညီညွတ်ရေးကို မဖြစ်မနေ တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။ တည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံရေး သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့ အင်အားစုတွေသက်သက်နဲ့ ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်လို့ မပြည့်စုံဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေ ပါဝင်တဲ့ ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်မှသာလျှင် ပြည့်စုံတဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မယ်။ ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင် အဆင့်တဆင့်မှာ ပါဝင်လာဖို့လိုတယ်။ နအဖဘက်ကလည်း အခုအချိန်အထိ တိုင်းရင်းသားတွေ ပါဝင်လာမယ့် အခန်းကဏ္ဍကို တိုးချဲ့သွားမယ့် အရိပ်အယောင်မမြင်ရသေးဘူး။ ဒီအချိန်အခါမှာ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေအနေနဲ့ တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရယ်၊ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေရယ် တကယ့်ကို တနည်းနည်းနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ကြဖို့လိုတယ်။
နိုင်ဟံသာ (မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး )
ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ အရင်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ စုစည်းခဲ့သလို လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေဟာ တိုင်းရင်း သားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ရိုးရိုးသားသား၊ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းနဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့လိုတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ကနေ့ အနေအထားမှာ အဲဒါမရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေနဲ့ စုစည်းဖို့ အားနည်းနေသေးတယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ဒီလိုပါပဲ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်း ဒီအာဏာရှင်စနစ်မှာ ပြည်နယ် တွေကို အခွင့်အရေး ခွဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားပုံစံမျိုး ဘယ်လိုမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ အာဏာ တွေကို ချုပ်ကိုင်ထားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကတော့ ဘယ်လိုမှ ရနိုင်ဖို့ မရှိဘူးဗျ။ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် သူတို့လိုချင်တဲ့ အခွင့်အရေးဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်မှာပဲ သူတို့ ရနိုင်မယ်။ အဲဒီတော့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေဟာ အကျိုးခြင်းထပ်တူ ဆက်စပ်နေတယ်။ သူတို့အချင်းချင်း အမြန်ပေါင်းစည်းဖို့လိုတယ်။ သူတို့အချင်းချင်း ခိုင်မာတဲ့ စုစည်းညီညွတ်မှု တည်ဆောက်နိုင်မှပဲ ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်တယ်။
ဂျိမ်းစ်လွမ်းဒေါင် (ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဒု-နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံ)
တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်တို့ ဘာတို့ အားလုံးက သိပ်လိုချင်ကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးသော နည်း နာဖြစ်တယ်။ တရားသောနည်းနာဖြစ်တယ်။ အဲဒီဟာလုပ်ဖို့ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂကသော်လည်းကောင်း၊ တခြားမိတ်ဆွေတိုင်းပြည်ကြီး များကသော်လည်းကောင်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြမယ်ဆိုရင် ဒါက အင်မတန်မှ ကောင်းတဲ့ပေါ်လစီဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဗမာပြည်ရဲ့အခြအနေဟာ ကောင်းတဲ့ပေါ်လစီ၊ တရားတဲ့ပေါ်လစီကို လိုက်ဖို့ဆိုရာမှာ ကျနော်တို့မှာ အခြေခံဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက် လည်းမရှိဘူး။ ကျနော်တို့ ဒီဟာ ကောင်းတဲ့ဟာ၊ ဒီဟာတရားတဲ့ ဟာဆိုတာ ကျနော်တို့ သွားပြီးတော့မှ တိုင်းဖို့ဟာ လိုနေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော့်အမြင်က ဒီနေ့ ဒီလိုအချိန်မှာ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေကို ဖြေရှင်းဖို့ ရာမှာ စိတ်သဘောထား ကျယ်ပြန့်ဖို့နဲ့ ဒီသင့်တော်တဲ့နည်းကို ရွေးချယ်သုံးဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ ဒီကောင်းတဲ့နည်း၊ တရားတဲ့နည်းကိုသုံးမယ့်အစား သင့်တော်တဲ့နည်းဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလို့ ကျနော်ယုံကြည်တယ်။ သင့်တော်တဲ့နည်းဆိုတာ တဦးအပေါ်တဦး နားလည်မှုထားရမယ်။ အားလုံးတန်းတူဆိုတဲ့ဟာ ခံယူချက်က သိပ်ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မကျဘူး။ ဒီနေ့ဟာ ကောင်းတဲ့ပေါ်လစီ၊ တရားတဲ့ပေါ်လစီ သုံးလို့မရသေးပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် သင့်တော် တဲ့အခြေအနေ၊ သင့်တော်တဲ့ပေါ်လစီကို သုံးမှသာလျှင် ကျနော်တို့ တဆင့်တဆင့်ပြေလည်မှု ရှိလာလိမ့်မယ်။ ဒါကတော့ အရှိကို အရှိ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုင်အိုက်ဖုန်း (ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး )
မြန်မာပြည်မှာ တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ တကယ့်တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးရရှိရေးအတွက် ဒီမို ကရေစီကိုအခြေခံထားတဲ့ တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ ကျနော်တို့လိုလားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ ပလောင်တမျိုးသားလုံးရော၊ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ရောက်ရှိတဲ့အထိ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ ကျနော်တို့ ပလောင်အာဇာနည် ခွန်ပန်းစိန်ပေါ့ ပလောင်ကိုယ်စား၊ ရှမ်းပြည်စော်ဘွားတွေရဲ့ကိုယ်စား ပင်လုံစာချုပ်ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာ ကျနော်တို့ ပလောင်အတွက် အင်မတန်ဂုဏ်မြတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကျနော်တို့ အသိအမှတ်ပြုထားတယ်။ သူ မျှော်မှန်းထားတဲ့ဟာကိုလည်း ကျနော်တို့ ဒီနေ့အထိ မရရှိသေးတဲ့အတွက် ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။
ပူကျင့်ရှင်းထန် (ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက် ဥက္ကဋ္ဌ)
ကျနော်တို့အားလုံး အေးအတူပူအမျှနေနိုင်ဖို့ ပြည်ထောင်စုရယ်လို့ ကျစ်လျစ်ခိုင်မာစွာ လုပ်ချင်သပ၊ တည်ထောင်ချင်သပဆိုရင် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြဖို့ ကောင်းရဲ့သားနဲ့ အခုဟာက ကျနော်တို့ တောင်ပေါ်သားတွေတင်မကဘူးဗျာ မြေပြန့်မှာလည်း ခွဲခြားပြီးတော့ စစ်တပ်မဟုတ်ရင် ဒီထဲမှာ မပါနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမှာ အားလုံး ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပြည်သူတခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီလည်းမပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ မပါတဲ့အပြင် ပါဖို့အင်မတန်မှ ကောင်းနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ ရှမ်းခေါင်း ဆောင်တွေ ခွန်ထွန်းဦးရယ်၊ စိုင်းညွန့်လွင်ရယ် စသဖြင့် (၉) ယောက်လောက်ကို ထောင်ထဲ ထည့်ပြီးတော့ အခုဆို ခွန်ထွန်းဦးတို့ ထောင်ကျတာ (၃) နှစ်တင်းတင်းပြည့်နေပြီ။ ပြည်ထောင် စုဖြစ်ပေါ်လာရေး အားလုံးပါဝင်အောင်ဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်မှာ ဆွေးနွေးမယ့်အစား ထောင်ထဲ ထည့်ထားတာကိုကြည့်ရင် ကျနော်တို့က တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ်၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမယ်၊ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ သုံးဦးသုံးဖလှယ်တို့ သုံးပွင့်ဆိုင်တို့ အဲဒါတွေကိုပြောနေပေမယ့် အစိုးရအနေနဲ့က လုံးဝရည်ရွယ်ထားတဲ့ပုံမပေါ်လာဘူးဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေရတယ်။
ဦးရွှေအုံး (ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ)
(၄၈) ခုနှစ်ကလည်း ပြည်ထောင်စုအစစ်မဟုတ်ဘူး။ (၇၄) ခုနှစ် ကလည်း ပြည်ထောင်စု အစစ်မဟုတ်ဘူး။ အခုဆွဲနေတဲ့ ပြည် ထောင်စုက ပိုပြီးတော့ မစစ်သေးတယ်။ ကျနော်တို့ ဖြစ်စေချင် တာက ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်ဖွဲ့ချင်တယ်။ ပြည်ထောင်စု စစ်စစ် ဆိုတာ ဗမာပြည်မှာ လူမျိုးကြီး (၈) မျိုးရှိတယ်။ (၁၅၃) မျိုးဆိုတာ လူမျိုးစုတွေ။ လူမျိုးကြီး (၈) မျိုးပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့မှ ပြည် နယ် (၈) ခုနဲ့ တန်းတူရည်တူ ပြည်ထောင်စုဖွဲ့မှသာလျှင်၊ ပြည် တွင်းရေး လွတ်လပ်ခွင့်ပေးမှသာလျှင် အဲဒီပြည်ထောင်စုဟာ တည်တံ့ခိုင်မြဲမယ်။ အဲသလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ လုပ်နေရင်တော့ တနေ့နေ့ပြိုကွဲမှာပဲ။
ခူးရေမာန်ထူး (ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး)
ပြည်ထောင်စုရဲ့အနှစ်သာရက ကွဲပြားမှုကနေပြီး စုစည်းမှုတရပ် ဘက်ကို ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ပြီးတော့ အေး အတူပူအမျှ တန်းတူတဲ့ အခွင့်အရေးရနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးကို ဒါကို စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုလို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကေအန်ပီပီအနေနဲ့ ဟိုး ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းစဉ် ကာလအတွင်းမှာ ကျနော်တို့ ပူးပေါင်းဖို့၊ မပူးပေါင်းဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့သဘောထားက ဗမာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး အခြေအနေ အဆင့်အတန်းကို ကျနော်တို့ ကြည့်ပြီး ဘယ်လို ပါဝင်ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအခြေအနေ မရောက်ခင်မှာဘဲ ကျူးကျော်မှုတွေဖြစ်လာလို့ ယနေ့အထိ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့က သီးခြားစီနေထိုင်ရာကနေ စုစည်း တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ အေးအတူပူအမျှ တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးတခုအောက်မှာ ကျနော်တို့ နေထိုင်ရလိုပါတယ်။
ပဒိုမန်းရှာလားဖန်း (ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး )
ပြည်ထောင်စုအနှစ်သာရဆိုတာ တခုကဘာလဲဆိုတော့ ပြည် ထောင်စုထဲမှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ တန်းတူရည်တူ ရှိရမယ်။ နောက်တချက်ကတော့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်ရှိရမယ်။ အဲ့ဒီ တန်းတူရည်တူရှိမှုနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပေါ်မှာ ပြည်ထောင် စုတည်ဆောက်ရမယ်။ အဲသလို တည်ဆောက်မှ ပြည်ထောင်စု အစစ်အမှန် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်လာနိုင်အောင်လို့ နအဖကို ကျနော်တို့ ဘက်ပေါင်းစုံက ပြည်တွင်းကရော၊ ပြည်ပကရော ဖိအားပေးမှရမယ်။ နအဖတွေက သူတို့နားလည်နိုင်မယ့် ဘာသာစကားနဲ့ သူတို့ကိုပြောဆို ဆက်ဆံမှ သူတို့က အဲဒီစကားဝိုင်းကို လှည့်လာနိုင်မယ်။တကယ်လို့ သူတို့ကို ဖိအားမပေးဘူး၊ သူတို့အပေါ်မှာ ချော့မြှူရေးဝါဒကျင့်သုံးနေမယ်၊ သူတို့ကို လိုက်လျောဆက်ဆံရေးဝါဒပဲ ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် အတိုက်အခံတွေကို သူတို့လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရတယ်၊ အနိုင်ကျင့်ချင်တိုင်းကျင့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ သဘောထားပြီးတော့ လှည့် တောင်မှကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေမှာပဲ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့ကို ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ နိုင်ငံရေးရော၊ စီးပွားရေးရော ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်။ ပြည်တွင်းမှာရော၊ ပြည်ပမှာရော လူထုတိုက်ပွဲတွေ ဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲမျိုး တွေနဲ့ဖိအားပေးဖို့လိုမယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့၊ တရားမျှတမှုကို လိုလားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေလိုမယ်။ ဒါတွေအားလုံးလုပ်နိုင်မှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစကားဝိုင်းကို ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ မဟုတ်ရင် နအဖဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အရေးစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ။
All-Burma resistance: 'Never happen'
By Subin Kheunkaew
Mae Hong Son - Efforts to bring together at least seven ethnic minority groups to mount resistance against the State Peace and Development Council inastruggle for autonomy may not be achievable any time soon.
The plan to unite Burmese minority rebel groups so they can pressure the junta for autonomy remainsapipe dream, admitted Shan State Army (SSA) leader Yod Serk inarecent interview.
His statement came just days before the junta made the surprise announcement ofareferendum onaconstitution, scheduled for May, andageneral election in 2010.
Col Yod Serk said the ethnic groups faced internal strife and lacked strong leadership and understanding aboutaconsolidated movement. He said the minority groups should join forces and set uparepresentative government if they wished to pressure the junta to come to the negotiating table.
"No conditions should be set for the talks until all sides agree toadialogue.
"The goal is to get everyone on board, shake hands or clink glasses. That would beahopeful beginning," the colonel said.
The SSA would let politics lead the fight against the Burmese government, said Col Yod Serk, saying the military approach in pressing for independence was outdated.
So far, he said, only the Karen National Union and the Karenni National Progressive Party appear to be most ready to embrace the non-military initiative.
The SSA also wanted to ally with the powerful United Wa State Army, but the UWSA had to resolve its internal problems first, Col Yod Serk said.
The UWSA has been accused of producing illicit drugs under the command of drugs kingpin Wei Sia Kang.
However, Col Yod Serk, who madeapledge to help curb drug trafficking along the Thai-Burmese border, said many key figures of the UWSA have agreed to abandon the illegal business and join him inafight for independence.
"We're getting old," said Col Yod Serk, 48. "We don't have much time. We have to join hands," he said.
Relations between the UWSA and the SSA soured after UWSA troops attempted to invade Doi Tai Laeng, the military base of the SSA opposite Mae Hong Son's Pang Ma Pha district, in 2005.
The failed Wa offensive was reportedly supported by the Burmese junta.
The SSA currently hasaforce of more than 4,500 fighters, using weapons mostly produced in China.
Col Yod Serk believes if China helps mediate the rift between the SSA and UWSA, the groups would set aside their differences and come to some kind of understanding.
China could also playamajor role in creating peace in Burma because the junta respects the Chinese government, he said.
International pressure on the junta to release opposition leader Aung San Suu Kyi from house arrest may not be enough to create momentum for change in Burma, he said.
"All ethnic groups should join hands to make their voices heard and push for recognition of their identities and rights.
"We know the Burmese government would fear us if we were able to unite, as it would then give us more negotiating power," he said.
Bangkok Post Stories
Boycott Beijing Olympic, Boycott these Stuffs Oly...
ဓါတ်ပုံများသည် ကိုနစ်နေမာန် ဘလောက်မှ ကူးယူထားပါသည်...
မွန်အမျိုးသားနေ.အခမ်းအနား (ထိုင်-မြန်မာနယ်စပ်)Mon ...
ချင်းအမျိုးသားနေ.အခမ်းအနား ရန်ကုန် နှင့် ချင်းမိုင...
စစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက လက်မခံ 2...
ကိုဆိုဗိုတို.လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းချက် မှတ်တမ်း Key...
For more pictures , click here Troops arrive as Ko...
အမျိုးသားညီလာခံနှင့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပ...
ပဒိုမန်းရှာလာဖန် ကို အလေပြုကြ .
တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် အသက်စွန်.သွားသော ပဒိုမာန်ရှာ...
All-Burma resistance: 'Never happen' By Subin Khe...